🥇 ▷ Isbarbar dhig ku saabsan waxqabadka cusboonaysiinta ee loo yaqaan 'DOOM' oo ah qalab kor u kaca ah, DOOM 3 ee 4K ... ✅
Isbarbar dhig ku saabsan waxqabadka cusboonaysiinta ee loo yaqaan ‘DOOM’ oo ah qalab kor u kaca ah, DOOM 3 ee 4K …
Maalmo ka hor ayay Bethesda soo bandhigtay imaatinka seddex ciyaarood oo caadi ah. DOOM tabaha jiilka hada jira, ee bixiya marin u helka DOOM, DOOM II iyo DOOM 3 oo ay kuxiran yihiin dhamaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Balanqaad adag oo ku saabsan qaabkan casriga ah ee lagu casriyeeyay aaladda cusub, ayaa yimid Xbox One, Playstation 4 iyo Nintendo Switch. In kasta oo ay u muuqato in ay tahay wax aan muhiimad lahayn oo aan muhiimad laheeyn, xaqiiqdu waxay tahay in wax qabad la mid ah aan laga helin qasaarooyinka oo dhan, halka ay tahay Isbarbardhiga waxqabadka DOOM wuxuu daaha ka rogayaa faa’iidooyinka iyo faa’iido darrooyinka kala duwan.
Digital Foundry waxaa loo xilsaaray tijaabinta dhamaan cayaaraha DOOM oo waxaan aragnaa muddo dheer in ay jiraan war wanaagsan oo xun. Waad ku mahadsan tahay isbarbardhigga waxqabadka ee la cusbooneysiiyay DOOM on console ka duwan
Marka hore DOOM Kani waa ciyaartii kaliya ee la qeybiyay, tan iyo markii la sii daayay, oo ku saabsan jiilalka dhallinta ee loo qeybiyay. Si kastaba ha noqotee, waa xaqiiqo xiiso leh in waqtigan shaqada horumarintu ay soo martay gacanta Nerve, oo horey u sameysay nooca Xbox 360 Arcade. Ciyaartii ugu horreysay ayaa la waafajiyey Xalka 1080p dhamaan consoles-yada, laakiin sida lagu muujiyey fiidiyowga, si sax ah looma sameyn. Natiijadu waxay tahay in marka qaraar ka sarreeya kan asalka ah la daboolo, waxaa jira dhaawac xagga muuqaalka ah, si cad, uma muuqato mid halis ah maxaa yeelay ciyaartu waxay leedahay qaab muuqaal leh. Hadana, waa iyaga, waxaadna arki kartaa in howsha aan si isdaba joog ah loo qabanin si looga fogaado, sababtoo ah waa dhibaatooyin ka dhashay Dib-u-habeyn oo beddel maqaarka, maxaa yeelay DOOM waxaa lagu ciyaaraa 4: 3 mana ahan 16: 9. Waxaa jira liis garoob ah oo cilladaysan oo la xidhiidha deked yar oo dareemayaasha gaagaaban oo natiijooyin aad ufiican laga helayo.
DOOM II looma adeego, maxaa yeelay Arinta yaabka weyn waa DOOM 3. Ciyaar aad u farsamo badan oo horumarsan oo dekedohoodu ubaahan yihiin shaqo dheeri ah si ay sifiican ugu shaqeeyaan consoles-yada maanta. Iyo waa maxay DOOM 3 Waxay ahayd isbeddel xag-jir ah fikirka sagaalka waxayna soo bandhigtay wax-soo-saar farsamo oo aad u xiiso badan. Ku fiican deegaanka, naqshadeynta cadowga iyo adeegsiga saameyn cusub, sida iftiin macquul ah oo dheeraad ah, DOOM 3 Waxay calaamadisay dhowr meelood oo muhiim ah, noocyo ka mid ah barnaamijyada guriga ee sannadahaas. Xaqiiqdii, waa ciyaar taas oo, himiladeeda darteed u baahan awood badan oo aan lahayn dhibaatooyinka waxqabadka PC-ga. Dabcan, waqtigaas ma jirin baaxad ballaadhan oo murugsan sida ay hadda tahay.
Laakiin waxaan ka qeybgalnaa qalabka loo yaqaan ‘console’ ee hadda jira, halkaas oo ciyaartan lagu soo rogay nooc caado ah. Marka loo eego jiilka cusub, natiijooyinka la helay waa kuwo la yaab leh, sababtoo ah xallinta wanaagsan waxaa lagu gaadhaa heer go’an 60 fps Beddelka Nintendo Switch beddelaadda 1080p (dillaac) iyo 720p (la qaadan karo) at 60 fps waxay ku guuleysataa natiijooyin aad u xiiso badan iyo sidoo kale consoles Xbox One X iyo Ciyaar 4 Waa maxay pro waxay gaarayaan 4K iyo walaalahooda ka hooseeya 1080p. Xaaladaha oo dhan 60 fps ayaa doonayay Laakiin inkasta oo ay umuuqato nacasnimo, maxaa yeelay ciyaartu way gabowday, waxaan aragnay maamuleyaal badan oo aan gaarin hammaddan, mana ahan kuwo cajiib ah. Waxa kaliya ee ku dhiban inuu joogteeyo heerkaas waa Nintendo Switch, marka khariiddada la furi doono ama laydh cusub la isticmaali doono.
Intaas oo dhan, soo noqoshada DOOM waa tallaabo muhiim ah, maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa taariikhda warshadaha ciyaarta fiidiyowga. Saadaaliyeyaasha, tixraacyada, kuwaas oo ah kuwa lagu heli karo ee lagu raaxeysto qalabka maanta jira, isla markaana ay sii hayaan muranka la xiriira luminta ciyaaraha ka yimid dukaanka ‘Xbox 360’ ama maktabadda isticmaale, taas oo ay saxan tahay, kuwa aan ciyaarin, waa fursad wanaagsan oo la sameeyo waa. Saddex ciyaarood oo qayb ka ah taariikhda € 4.99 midkiiba.